Abantu abaningi babe amaphupho. Futhi amaphupho engavamile futhi ngezinye izikhathi ngisho scary. Ezinye abakhohlwe ngokushesha ucabangana, kuyilapho abanye nje musa unamathisele ukubaluleka kakhulu, kuyilapho abanye babone amabika amaphupho futhi uzame ukuzixazulula. Kunoma yikuphi, ulwazi nencazelo yalokho akubona ikhono ukusizakala izixwayiso zakhe ningalokothi engadingekile.
Ukuze siphendule lo mbuzo lokho amaphupho ukuthi ikhanda, kubalulekile ukuba acabangele yonke imininingwane yalokho okwenzeka, owashonelwa ikhanda lakhe, izingxenye ekhethekile nokuningi. Ngokuvamile, abantu iphupho ukubona inhloko izilwane, izilwane ezihuquzelayo noma abantu.
I hhephuna noma waquma ikhanda zomuntu - uphawu ekuqaleni bokusungula. Uma she funga noma abangajabule, kunamathuba amaningi okuthi wone kakhulu othile ngabandayo. Pitch ikhanda ibonisa ukuthi kuwufanele isikhathi esinengi esingakanani okufanele usichithe zinezinkinga zazo kanye nezindaba.
Lapho sizibuza ukuthi amaphupho elinqunywe ikhanda kothandekayo kufanele aqaphelisise umndeni ekuphileni kwansuku zonke. Kuyinto kungenzeka kakhulu ukuthi babe sengozini sina ngokuya kokubili impilo ezingokomzimba nezingokwengqondo. Ukuthwala ekhanda elinqunywe - ukuthatha isinqumo ngaleli cala kanye nemisebenzi lomunye umuntu. Lapho ukusika ikhanda iphutha ngesikhathi elwa fair, izinketho kungenzeka ezimbili: ekulahlekeni noma yokufuna igunya. Eyokuqala kwenzeka uma ukulahlekelwa kwekhanda lakhe, kanti eyesibili - uma ukusika abancintisana naye.
Kungani dream of a ikhanda elinqunywe sendoda? Ngaphezu kwakho konke - kuze kwaneliseke. Nokho, kuwufanele ukunaka kakhulu ekhanda:
Hairy - romance, ubuhlobo obusha, umndeni, futhi injabulo yokuthola;
Bald - Antics akunangqondo, ubuwula childishness, sizohlangana indoda ezimfushane;
ugeze izinwele zakho - ukhulisa emsebenzini, ukunyuselwa amaholo, ukuchuma ngokwezimali, ukuvela umnumzana ocebile.
Kungani iphupho elinqunywe alingana nekhanda lomuntu
Floating elinqunywe ikhanda obukhomba ugqozi lokudala nemibono ezingalindelekile eziyoholela izenzakalo ezithakazelisayo. Kungaphinde kusho futhi ukuthi ozama ukuphuma isimiso futhi kuyisicefe imisebenzi yasendlini. Uma ushonelwe ikhanda, kodwa iphupho uzizwa ukahle, ngakho maduze nje kuzofika nokuthula. Kungaba ngcono uma give up ukugeleza ukuphila, futhi ngeke kuthiye izenzakalo eziqhubekayo - ukuthi lizodla ngokuvumelana ukuzithuthukisa emhlabeni.
Kuwufanele benaka yilokhu uyaphupha ikhanda wahlukaniswa, eyabonakala omunye umuntu. Lokhu kuwuphawu lokuthi ongenawo isimo. Kukhona othile qinile ukuphoqa ukuba enze izinqumo futhi ukwenza ngokuvumelana esiqinile nentando yakhe. Uma inhloko alien kwakunguwe, singalindela umhlangano umuntu owayenesikhundla esiphakeme, umphathi abakhulu noma umxhasi. Lo mcimbi uthembisa amathuba njengoba sisihle ematfuba ekukhombisa emakhono abo, kanye nemiphumela emibi kulabo abangekho beqiniseka ngokwabo kanye ekuphumeleleni kwebhizinisi okuhleliwe.
Kungani iphupho alingana nekhanda lomuntu elinqunywe nalapho umzimba ndawo emehlweni? Mhlawumbe, maduze uthole ukwesekwa ovela ongamazi. Uma ikhanda siqu, udinga ukuthi ucabange ngesimo sempilo yabo, noma iya ku-iholidi ukuze akhulule ukungezwani nokucindezeleka. Shona, linemikhondo yegazi, itjengisa izinkinga esikhathini esizayo ezihlobene nomsebenzi, isimo sezimali noma izindaba zokuphila kwakhe.
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi amaphupho elinqunywe ukhuluma ikhanda. Ezimweni eziningi, lokhu kuyinto iphupho elingokwesiprofetho futhi isixwayiso. Kuwufanele zama ukukhumbula ncamashi ukuthi kuthiweni. Lezi kungaba amazwi ngazinye, ibhekisela izinkinga kule ndawo, kanye nemishwana ephelele ofuna ukulalela. iphupho elingokwesiprofetho zihlukaniswa ngempela kalula endleleni evamile yokubalwa - izithombe zokugcina illegible, futhi emva uvuka kuyinto ukukhathazeka futhi imizwelo enamandla.
ikhanda zishwabene kubonisani ukuntula imali futhi msebenzi olethela lutho. izindlebe Big ukubikezela ukuthola izindaba ezibalulekile. Okuningi kuxhomeke ekutheni nombala wezinwele:
amnyama - uthando okusondelayo;
ukukhanya - ukuvela uhlobo futhi umuntu mnene;
obomvu - ukuze nokukhohlisa zingakhulumi inkohliso;
ensundu, ensundu - ezinkingeni ababhekene nazo emsebenzini;
igolide, ensundu - ukukhetha wamanje uphelele ngawe.
Izinja ukuphila nendoda Sekuyizinkulungwane zeminyaka, ngakho ayikho into isimanga yokuthi ngezinye izikhathi avele kithi ngamaphupho izexwayiso. Ngokuvamile, lezi zilwane lalifanekisela umhlangano futhi abonisa isimo sabantu ayephila nabo kweqiniso. Uma ukubonakala ekhanda inja elele akakubangeli kwesaba nalokho kuthuthumela luwuphawu lomhlangano nomngane ubudala ngubani okwamanje uhlala kude kakhulu. Futhi uma kwenzeka wena kuyoba neze kuzokwenzekani uma you kancane lindela it.
Lapho ngigqolozela fixedly ikhanda uthi ukubukeka yomuntu izinhloso ezimbi. Ngemva iphupho enjalo kuwufanele okuseduzane abangane abasha futhi sizame hhayi ubhalisele ezamehlela ezingabazisayo, ngoba isiphukuphuku kuyoba nguwe kuphela. Inhloko, elibangela imizwelo eyakhayo ephusheni, is ukuhlangana nomuntu nginenhliziyo abayoba umngane wakho othembekile nomvikeli. Ngokuvamile lowo muntu kumele futhi inzuzo ebhizinisini umlingani ku ongamenza njalo ubale.
Kuvame ukuba kube lukhuni ukuqonda ukuthi yini amaphupho elinqunywe ikhanda inja. Noma kunjalo, lokhu cishe njalo ziwuphawu oluhle. ikhanda Dog isikisela izimbangi wahlulwa okwesikhashana futhi ababeshisekela abazokujabulela ngikushiye wedwa. Uma inhloko ithola ukubukeka esongelayo, igwavuma noma amatshe, uqaphele kwesiyingi abangane nezihlobo. Phakathi kwazo kunane-umuntu efisa ingakulimaza futhi kungase kube buhlungu.
Girls iphupho kuletha izindaba ezinhle - maduze ngeke esaba khona uzakwethu efanelekayo ephathini inzuzo kakhulu umshado. Eziningana inja amakhanda ukhulume yokungazethembi wobuntu abalithandayo. Nokho, kungase kubabangele nemiphumela ebuhlungu, ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa umuzwa futhi ngokushesha ukuxazulula zonke izinkinga inkani ezimpilweni zabo.
Phakamisa ikhanda inja - ukuhlela izinto ezibalulekile eziphathelene nezokwelapha izenzakalo ongaletha izinzuzo kanye nokuqashelwa. Uma ufuna ukuqonda ukuthi yini ephusheni ukuba bangabuyeli ngokwabo, waquma ikhanda lakhe, cabanga ibhizinisi lakho kanye umsebenzi. Cishe, ngeke sibhekane ukhuze sina emsebenzini noma inhlawulo. Kufanele kube eyinakekela futhi ngokucophelela ngemva leliphupho, ugweme izinkinga eziningi ezinkulu.
Uma dream wena ikhanda isilwane sika elinqunywe ke empilweni une inkinga ingaxazululwa. Kodwa musa ugijimele. Haste nokunganaki kungathinta omubi kakhulu kokubili ezindaweni ezithile, kanye empilweni yakho. Uma sinqamukile ikhanda, uzothola ukushaqeka aqinile futhi imizwa, futhi mhlawumbe ukuphazamiseka kwemizwa. Kufanele ukulungiselela isikhathi ekuphileni, ukukhuluma nabangani kanye nesineke.
Izingulube ngokuvamile ukuhlobanisa kithi ngodaka, ubuwula okungenangqondo. Ngo amaphupho ikhanda yengulube sivame amagugu efanayo. Nokho, ngokuvamile, luthela kanye incazelo efihliwe. Kuzo zonke amaphupho ami, lapho kukhona ikhanda yengulube, kukhona Amacebo senkohliso phezu ingxenye Umuntu ongaziwa abanethemba singehlela inhlalakahle yakho kanye nezindaba zezimali.
Ukuze uzwisise ukuthi yini amaphupho elinqunywe ikhanda yezingulube kungenziwa kuphela kumuntu ngokwakhe, ayebonile leliphupho. Ngoba ngokuvamile hhayi uphawu ebalulekile ikhanda, futhi okwakwenzeka jikelele. Pig sika ikhanda - uphawu yokungazethembi ngokomoya futhi ephazamisekile emqondweni. Indoda ezama ukuxazulula izinkinga acute wokuphila noma zinethonya ngandlela-thile lezi zinkinga.
Uma uqhubeka ikhanda yezingulube, nibe nilindele izinkinga zezempilo. Lokhu kungaba ukugula kancane abandayo, futhi sina. Ngakho-ke, asikho isidingo ukuba nethemba lokuthi maduze zonke kuzodlula ngawodwana, ngoba imiphumela ingaba obungakulindele kakhulu. Endabeni izinkinga zezempilo okwamanje, iphupho kubonisa ngokushesha ukuthi kuzokwenzekani ukuxabana omkhulu, niza ngokuthukuthela nangokufutheka, ngithabatha engingakubekanga uzozisola isikhathi eside.
Uma uyazibuza ngalokho ukuphupha zekhanda a elinqunywe yezingulube, kubalulekile ukunquma ukuthi ungabona-ke kusukela ohlangothini, noma anqunywe ngokwabo. Esimeni sesibili, kuba sokuhle nezinto ezizayo. Futhi ukuze kube ngcono. Wena ukunqoba izitha zakho ulwa fair (kungaba njengoba ukuthandana, nokuthuthukiswa kwemisebenzi), ukuzitholela udumo, ukuqashelwa kanye nemali. Nokho, ngemva leliphupho kufanele uqaphele. Awukwazi sithathe imali nezikhwama zemali, akhiphe amagugu zabanye abantu noma ukuboleka.
Carry ikhanda yengulube - ukulungiselela uhambo, okuyinto uthembisa izinkinga ezincane. Kufanele sicabangele ngemigudu ngaphambi imicimbi kanye ukuzama ukugwema izinkinga. Kungcono Thenga imali eyengeziwe - kungenzeka ukuthi bayakufa ukusiza ukuxazulula iningi nobunzima.
Okuxakayo ukuthi, naphezu kwekhanda cat sika iwuphawu izindaba ezinhle. Lokhu ngokuvamile kuwuphawu izitha wahlula, noma ephelele yokutakula izixazululo ezinkingeni ahlala isikhathi eside zezimali.
Yini iphupho inhloko yahlukana ikati, ngokuvamile kuxhomeke ekutheni nombala wezinwele:
Auburn - nenkanuko phezu ingxenye wobulili obuhlukile. ukunakwa okunjalo kalula ukube ungakunaki okwenzekayo.
Black - Ukuvikelwa, hhayi evamile ngokomzimba, kodwa engqondweni nangokomoya. Black cat ngokuvamile ubonisa khona umuntu amakhono akhethekile.
White - ukuvela fan ngokwezinjongo ezinhle. Ngokuba abanjalo umuntu uyoba contact obalulekile ngokuyinhloko ezingokomoya nokuxhumana.
Gray - ukubukeka impilo yakho abantu nomona futhi abathembekile. Uma uku ngokucophelela, ngisakhathazwa akuyona kusongelwa.
Tri-umbala - uzobe yimpumelelo Amazing zonke nakangaka yakho.
Ezimthende - unbalance, kokubili uwedwa futhi ukubonakaliswa ukuziphatha okunjalo kusukela izihlobo noma abangani izincwajana.
Purple, oluhlaza noma eminye imibala engavamile - nesenzakalo bangani ezingalindelekile noma lover ongenalwazi.
Wet ikati mangy uyaphupha welashelwa isifo okwathatha isikhathi eside kangako. Ngemva ezinjalo ngombono Kufanele sikuthathe ngokungathí sina zempilo yabo.
Kungani iphupho ikhanda elinqunywe cat? Ngokuvamile, sikufisela inhlanhla nokunqoba. Nokho, uphawu ingaba nokulahlekelwa reflection of ukuzethemba, kokuba inani elikhulu izakhiwo. ukuziphatha kwakho budedengu kungaba ezenza abantu basabele ngendlela omubi eduze noma kubangele ukudabuka lokuba nobuhlobo eside.
Ukuze uqonde ukuthi iphupho elinqunywe iqhude ikhanda, emi pay ukunakwa kuqala umbala izimpaphe. White Cock uthi ukuxabana okusondelayo nomngane noma esincintisana naye, okuzobe kusho ukuphela nokubuyisana nekusombulula zonke izingxabano. Ubuhlobo nomuntu bese kuphela ukuqiniswa.
Black iqhude ikhanda ubikezela ezingqubuzana kakhulu nge yomuntu okuzondayo futhi esenza ngemuva ngesakhiwo. Kufanele uphazamisa kuye bonke oxhumana nabo ukuze singathwesi badalele nakakhulu. izimpaphe Red uthi impikiswano noma ukungaqondi nomuntu kamuva siyokulethela isithakazelo esinamandla. Lokhu kungaba ukuqala ubuhlobo obungathí sina eside.
Ukuphendula umbuzo yini amaphupho ikhanda we iqhude, singasho ukuthi lokhu kuwuphawu olucacile esongelwa ukugula. Ungahlala umkhuhlane noma uthole ukuphazamiseka kwemizwa. Uma Nokho, ngesikhathi esifanayo ungakaze uhlangabezane imizwa engakhi, iphupho lezo zithembiso ukwanda umsebenzi nempumelelo emisebenzini athuthukile. Man umbono ubikezela ekunqotshweni amantombazane etholakalayo.
Uma dream wena qonda ezintweni ngezandla nangezinyawo umzimba egijima ezungeza egcekeni, lithi manje esimweni Yimpi enzima lena ngoba imigomo yabo kanye nemibono. Uma umzimba iqhude wabanjwa, uzothola umsebenzi omusha noma ngempumelelo ugcwalise zonke ekuqhutshweni seluqaliwe.
Ukuze uqonde ukuthi iphupho ukuba anqume ikhanda laleyo nyoka, kufanele sinake yonke imininingwane umbono, njengoba ikhanda laleyo nyoka uqobo ongathwali abanye incazelo kufihlwe futhi iphathwa njengoba lonke uphawu. Snake ikhanda lingasho ukumehlula ophikisana naye ubudala, ukususa izinkinga futhi ukuqongelela ingcebo. Nokho, lezi zimiso kungenzeka okuphambene, kuye ngokuthi umbala inyoka izikhumba.
Ekuphenduleni umbuzo "Yini emaphupho lasho lokukhulu uyonquma ikhanda laleyo nyoka?" Kufanele sibheke ibala lesikhumba. Uma kwaba abamnyama, nibe nilindele asemrarweni, kuze kube ingozi ebulalayo. Kusukela ngamaphupho anjalo awawona ekufanelekele ukulindelwa izindaba ezinhle. Umbala omhlophe ubonisa khona isitha ngeke ingabe ukulimala okukhulu. inyoka Yellow uthembisa ukukhashelwa nobuzenzisi phezu ingxenye izihlobo. Green uthi ngokushesha empilweni yakho uze streak sokukhanya, zonke izingqinamba ohlangabezana into yesikhathi esidlule. Red ibala lifanekisela ubuhlobo obungebuhle nomlingani wakhe. Ngemva leliphupho kufanele ucabange ukuziphatha kwabo bese uzama ukugcina imizwelo engakhi.
Umbala segolide ibonisa ukuthi izinto ezinkulu izenzakalo jikisa ukwehluleka nezinkinga. Orange - nesilingo ukuthi kungaba yingozi kuwe. Coloured inyoka isithembiso enkingeni enkulu, ngoba okwamanje imicabango yakho ngempela izinto kuhlukile.
ikhanda Big ukhuluma ngezinkinga ezingathí sina ezidinga ngokushesha. ikhanda Small imele eziningi izitha elincane kancane kancane kuzokuletha yithemba. Eziningana elinqunywe inyoka amakhanda ukumela isitha esinamandla, ukuze ubhekane ukuthi kuyoba nzima kakhulu ngaphandle ukwesekwa.
Ukuchazwa kwamaphupho - inqubo eyinkimbinkimbi kudinga ikhumbula yonke imininingwane kanye nemicimbi. Ikakhulukazi uma uyazibuza ngalokho iphupho ukuthi amakhanda. Phela, ngisho uphawu emibi kunayo yonke kungaba wawusho inhlanhla nempumelelo ezinhle, kuye ngokuthi lokho okubonwayo noma kwenziwe iphupho lakhe indoda. Ungalahli ithemba uma izinkinga umbono nezithembiso lesi sifo. Eza hhayi ngokushesha, ukuze ube nesikhathi ukucabanga ngezindaba futhi nempilo yabo, ngesikhathi sithathe izinyathelo ezidingekile.